Mmụọ nke Ahịa gara aga, Ugbu a na Ọdịnihu | Martech Zone
Ndị mmụọ nke ahịa gara aga, ugbu a na ọdịnihu
Sunday, December 22, 2013 Tọzdee, Eprel 1, 2021 Douglas Karr
Kwa afọ, m na-agbasi mbọ ike ma ọ bụ dee ederede amụma ma ọ bụ kwalite nke onye ọzọ. Kapost etinyela ihe omuma a - Mmụọ nke Mmụọ nke Oge Gara Aga, Ugbu A & Ọdịnihu:
Ebumnuche nke infographic anyị bụ ịse foto nke gara aga, ugbu a, na ọdịnihu dị anya nke ịzụ ahịa. Anyị nwere olile anya na ọ masịrị gị.
Amụma na-emetụta m n'ihi na ha nwere ike ịtọọ atụmanya nke na-agaghị enwe isi. Ekwenyere m na ọbịbịa nke mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze dị ka nke a. Ezie na usoro di egwu iji kwado ahịa, ekwenyere m na ọ kpuchiri usoro mgbasa ozi ndị ọzọ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ nke ọma. Nke a apụtaghị na mgbasa ozi mmekọrịta adịghị arụ ọrụ - ọ bụ ihe megidere ya. Naanị m kwenyere na ndị ahịa na-etinye oge na mgbalị dị ukwuu n'ịrụ ọrụ mgbasa ozi ọha na eze na ha chefuru na ndị na-ajụ ase dị ka email ka na-ebugharị ọtụtụ okporo ụzọ na mgbanwe.
Nke a bụ ndụmọdụ m - tụọ mmetụta nke gị gbalịsie ike n'afọ gara aga ịkọ amụma mmefu ego gị iji gaa n'ihu na-agba mbọ mbọ azụmaahịa gị n'afọ ọzọ. Nke a bụ igodo dị mkpa, n'agbanyeghị. Debe otu pasent nke ego ịre ahịa gị maka ịnwale atụmatụ ọhụrụ ma ọ bụ ịnwa nke kachasị ọhụrụ. Nke a ga-eme ka akpịrị ịkpọ nkụ gwụ gị na nke ọzọ gbaa ihe na-adọrọ uche gị.
Tags: ogbe-na-gbawara emailewere ọdịnayaakpọ oyiala ubihyper-onwekapostngwa ahiaakụrụngwa ahịanchịkọta amụmateknụzụ dị egwu
7dị XNUMX nke Ndị Ahịa Digital
Ndụmọdụ 10 maka SEO Copywriting na Ọnọdụ